Ahoana ny fomba ahafahana mahazo backlinks dofollow kokoa amin'ny tranokalanao?
Raha vantany vao mametraka ny orinasa an-tserasera ianao, dia te-hahazo ny laharana ambony amin'ny valin'ny fikarohana. Na izany aza, tokony ho fantatrao fa tsy azo atao ny miditra ambony amin'ny alina. Tokony hanorina fanentanana fananganana rohy ianao alohan'ny hanombohanao ny vokatra voalohany amin'ny asa ataonao.
Fantatry ny rehetra fa azo atao amin'ny fomba samihafa ny rohy. Ny backlinks sasany dia afaka mitondra ny mari-pahaizana manokana misy anao, raha ny hafa kosa mety handratra ny lisitry ny habaka ary hanimba ny lazanao marika. Ny rohy rehetra dia zaraina amin'ny dofollow ary nofollow. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava ireo hevitra roa ireo aho ary hanazava ny fomba ahafahan'izy ireo hisy fiantraikany amin'ny fihetsikao SEO.
Ity karazana backlinks ity dia manondro ny toetra HTML izay ampiasaina hamelana ny botsikao hanaraka ny rohy. Raha misy olona manapa-kevitra ny hanaraka ny sehatra misy anao amin'ny alalan'ny rohy dofollow, ny fikarohana bots, ary koa ny mpampiasa isa, dia hahazo fotoana hanarahana ny tranonkalanao. Ny rohy Dofollow dia mamakivaky sokatra fifandraisana ary mitondra fifamoivoizana amin'ny vohikala manatsara ny toerana misy anao eo amin'ny SERP.
Mitady marika ny rohy dofollow ary manamarina ny habetsahan'ny mpampiasa mifandray amin'ny pejinao mba hahatakatra ny maha-authoritative ny tranokalanao. Ny mahametimety kokoa ny dofollow backlinks ny tranonkala dia nahazo, ny teboka marobe amin'ny Google dia mety ho azonao.
Ny fomba tsotra mahazatra hahazoana rohy dofollow dia mampiasa ny teny filamatra sahaza ho toy ny lahatsoratra fanoratana. Na izany aza, tokony tokony hifantina amim-pitandremana ireo loharanon-tranonkala ahafahanao mahazo backlinks dofollow. Tokony ho mendri-piderana, azo atokisana ary manam-pahefana izy ireo. Ankoatr'izay, tokony hiara-miasa amin'ny loharanom-baovao mifandraika amin'ny tsenan'ny varotrao ianao. Ohatra, raha mahazo lohamilina iray avy amin'ny loharanom-baovao ianao toy ny Forbes, Entrepreneur, New York Times, dia hitondra tombony bebe kokoa sy laza ianao noho ny an-jatony an'arivony tapitrisa tsy dia mahafa-po loatra. Noho izany, ny rohy dofollow izay avy amin'ny loharanom-baovao loharanon-kevitra dia tena vato azo antoka avy amin'ny Google.
Ny fomba voalohany hahazoana raki-tsarobidy dofollow dia amin'ny famoahana tsara votoaty an-tserasera. Raha manome ny mpampiasa manana votoaty manan-danja sy mahaliana ny tranonkalanao izay manana ny lanjany amin'ny informatika, loharanon'ny tranonkala hafa dia hampihena azy io ho fampahalalana sarobidy ary hizara an-tsitrapo izany amin'ny hafa an-tsitrapo. Izany dia fomba mahazatra hahazoana jiro organika ho an'ny tranokalanao. Ny olana tokana mety atrehanao amin'ny fampielezan-kevitra natoraly amin'ny rohy dia ny hahatonga anao hanomboka fotoana bebe kokoa raha hanomboka amin'ny pejy ambany pejy ny pejy web anao.
Na dia izany aza dia misy fomba vitsivitsy hanatsarana ity dingana ity. Azonao atao ny mamporisika rohy mankany amin'ny domain anao amin'ny alalan'ny fanasana ireo tranonkala hafa hametraka dclollow ho an'ny votoatiny. Tokony hanamboatra bakio amin'ny tranokalanao mora araka izay azo atao ianao. Azonao atao, ohatra, ny mametraka fanasana hampifandray amin'ny votoatiny sy ny adiresy URL an'ny tranonkala Source .